LG G6 ga-enwe iko iko iji nyere aka ikuku ikuku | Gam akporosis
Ọfọn, ọ dị ka LG adịla njikere ịmalite atụmatụ ndị ahụ niile anyị na-efu na LG G5, ekwentị nke ahụ họọrọ ihe maka modular ịhapụ gị ụfọdụ adịghị ike ndị bụ kpọmkwem ndị kacha nweta nkatọ sitere na mpaghara gam akporo.
Dị ka oge ọ bụla anyị na-amatakwu atụmatụ nke LG G6, dị ka omume ọma nke ditching modular, na ọhụụ ọhụrụ site na ETNews, onye ahụ na-ekwu ọkwa ọhụụ ọhụrụ nke LG ọ ga-enwe iko n’azụ, yabụ ọ ga - abụ ekwentị G mbụ izizi iji atụmatụ ahụ wee pụta.
Ma ọ bụghị naanị mgbakwunye na-eme ka ọdịiche dị iche na ekwentị ndị gara aga G, mana ọ ga-emekwu ihe na wireless Nchaji mwekota, ebe ọ bụ na LG bụ otu ihe ahụ na-akọ na ụdị ụgwọ a na-eme ka o sie ike site na ihe dịka metal.
Nsonye nke iko ga-eduga onye na-emepụta Korea ka ọ mechie ahụ nke njedebe ahụ kpamkpam batrị mechiri emechiYa mere, ka anyị nwee olileanya na ọ gaghị ahapụ anyị oge a ma weta smartphone nke na-enweta ụbọchị zuru oke yana batrị dị elu karịa LG G5.
Agbanyeghị, rue LG G6 nwere ụdịdị, nke dị n'oge ahụ yiri ka ewepụsịrị ya na ekwentị, anyị ga-echere maka akụkọ gọọmentị na MWC nke ọ ga-egosi iji gosipụta ọkwa ọhụrụ ya. LG, nke dị ka Samsung, ọ bụ ezie na ọ bụghị ngwa ngwa, kwesịrị iwetara anyị ngwaọrụ mkpanaka gam akporo nke na-adọta anya na ọchịchọ nke obodo gam akporo, nke a ka hụrụ ma chọọ inwe nke dị ka onye ahụ mara mma LG G2.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G6 nwere ike ịnwe iko na azụ maka ikuku ikuku
Nwere ike ịdebanye aha ugbu a ka ị bụrụ onye mbụ ibudata egwuregwu vidiyo 6 Mega Man